Deymaha oo ku adag ajnabiga - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Deymaha oo ku adag ajnabiga
La daabacay onsdag 26 september 2007 kl 15.36
Abuuritaanka shirkado keli loo leeyahey, waxey ka mid ahaayeen fikirradihii ey dawladda ey ku midoobeen xisbiyada dalka ka taliya suurtagalka uga dhigey sidii ey hogaanka ku hannan lahaayeen.
Sanadkii 2006-dii ayaa heyadda NUTEK dawladdu u xilsaartey iney wax ka soo ogaato caqabadaha hortaagan, ama la soo gudboonaan kara dadyoowga asalahaan ka soo jeeda dalka dibaddiisa ee ku hamiya ama leh sharuukado ey mulki u leeyihiin, Isal markaana soo bandhigaan sidii wax looga bedeli kari lahaa.
Howsha loo xilsaarey heyadda Nutek ayaa ku ekeyd bishii Maarso ee horraantii sannadkan.
Barnaamijka qeybtanna waxaad ku maqli dontaan natiijadii amuurtaa ka soo baxdy, ama laga soo saarey oo dhowaantan la soo bandhigey.
Warbixinta ey soo gudbisey heyadda Nutek ayaa lagu gaarey natiijooyin iyo warysiyo lala yeeshey mulkiileyaal shirkadeed asal ahaan ka soo jeeda dalka dibaddiisa. Halkaasina lagu ogaadey in mulkiileyaasha asal ahaan ka soo jeeda ajnabiga ey dhibaatooyin kala soo gudboonaadaan dhanka miisaniyad gelinta iyo haddeyba noqon laheyd sidey deymo uga heli lahaayen cidda awoodda u leh.
Maria Massoni, waxey ka mid aheyd mashaariikhleyda wareysiyada lala yeeshey. Mar ey wareeysi la yeelatey Manuella Persson oo ka howlgasha idaacadda calamiga ah ee radiyaha Iswiidhen oo goob joog inooga aheyd goobtii lagu soo bandhigayey warbixintaa waxaa ereyadeedii ka mid ahaa.
- Aniga qudheydu derbiyada weyga horyimaaden, madaama aan ahey ganacsade ka soo jeeda dalka Iiraan. Wey dhacdaa in ajnabiga ey kala soo gudboonaadaan dhibaatooyin kolka ey isku dayaan ama ey leeyihiin shuruukado. Sida ey sheegtey Gabadha lagu magacabo Maria Massoni oo ka howl gasha shirkad ey mulki u leedahey.
Caqabadaha ugu waaeyn marka laga yimado asal ahaan halka ey ka soo jeedaan dadyoowgaasi ayaa warbixinta lagu caddeeyey iney ka mid tahey dhanka maalgelinta.
Sida warbixintu caddeyseyna loo bahan yahey hab ama nidam ka duwan in loola dhaqmo ama wax looga bedelo hab-fkireedka heyadaha ku howl leh.
Kennet Karlsson,waa madaxa suqa xiriirka ee bankiga lagu magacaabo Sedbank.
Bankiga Swedbank oo ka mid ah heyadaha gacanta ka geysan kara, islamarkaana goob joog ka ahaa goobt warbixintaa lagu soo bandhigayey. Muxuu middaa ka qabaa, sideese wax looga bedeli karaa.
Miyeyse uga dhib badan tahey ajnabiga in deyn la siiyo? Kennet wuxuu ku jawaabey.
- Dhibaatadu maaha dalka uu asal ahaan shakhsigu ka soo jeedo, ama midabka uu leeyahey, caddaan, madow, guduud ama jaale.
Dhibaatadu waxey tahey in kolka ey bankiyada soo gaaran codsi deyn, la eego oo keliya suurtagalka sidey deyntaa isaga bixin lahaayeen.
Weyna ka sahlan tahey in dadyoowga iswiidhishka ahi ka suurtagal badan yihiin sidey deynta ku bixin lahaayeen, maadaama suurtagalka shaqo ka badan yahey ciddii dalka soo galootinimo ku timidey.
Isla markana madama shirkado cusub ee abuurma ey dan ugu jirto labada dhinacba haddu noqon laha horumarka dalka iyo haddey noqon laheyd shakhsiga qudhiisaba loo bahan yahey sidii gacan buuxda looga geysan lahaa.
Sida uu qabo Kennet Karlsson, madaxa suqa xiriirka ee bankiga Swedbank.
Fikir midkaa la mid ah waxaa isaguna qaba sarkaalka magaciisa la yiraahdo Peter Kempinsky, kana howl gala heyadda FBA, oo ey Nutek u wakiilatey warbixin laga soo diyaariyey caqabadaha la soo gduoonaada mashaariikleyda asal ahaan ka soo jeedda dalka dibaddiisa. Ereydiisiina waxa ka mid ahaa:
- Waxey caqab laba geesood ah. Haddey noqon laheyd tan shakhsiga siduu bulshada uga mid noqon laha iyo dhinaca kale horumarka dalka.
Wareysigaana waxaa inoo soo diyaariyey Manuella Persson.